UBaxter uthembisa ukuyiphendula umshini iChiefs - Impempe
UBaxter uthembisa ukuyiphendula umshini iChiefs
Umqeqeshi omusha weKaizer Chiefs, uStuart Baxter usethembise ukujika leli qembu alenze liphinde libe yingozi njengakudala. UBaxter uqinisekilwe njengozocija Amakhosi kulandela ukuxoshwa kukaGavin Hunt.
Lo mqeqehsi waseScotland uqale ukusebenza eNaturena ngoLwesithathu ngemuva kokumenyezelwa ngokusemthethweni. Usebuya isibili kuleli qembu. Selokhu lagcina ukuhlabana lisaphekwa nguye eminyakeni engaphezu kwemihlanu edlule.
“Kubalulekile ukuthi abantu bakuqonde ukuthi laba baqeqeshi abebelapha bangabaqeqeshi abahle, ababoba abaqeqeshi ababhedayo. Bangabaqeqeshi abaphezulu ezweni.
“Ngakho, angizufika ngibhidlize yonke into eyenziwe. Kumele mina ngithole indlela ehlukile yokwenza izinto bese ngivuselela isiko lokuwina. IChiefs isihlukile kunale engayishiya lapha.
“Seyingcono kakhulu. Ngiyazi kulokhu kukhulu okulindelekile. Kumele ngibhekane naleyo ngcindezi,” kusho lo mqeqeshi ineminyaka engu-67.
“Iligi seyinzima kakhulu manje… seyithuthukile ekutheni uma ubheka amaqembu amancane awaseyona into ongayithatha kancane. Imidlalo yonke seyinzima. Ibhola liphucukile, lijikile.
“Ngiyakhumbula ngesikhathi ngilana okokuqala ngakhuluma ngokushintsha uma uqeda ukuthola noma ukulahla ibhola, ngahlekwa… kodwa manje leyo ndlela seyisetshenziswa cishe yiwo wonke amaqembu.
“Manje sekumele ngithole enye indlela esizoyisebenzisa ezosenza sibe ngcono kunabanye. Kuzoba yinselelo lokho, kodwa yinselelo engizoyithakasela,” kuchaza uBaxter.
UBaxter akafani ke nomuntu omusha kuleli njengoba ethi ubengena ephuma ezobona izingane zakhe. Kuzoba kukhona uLee ongumqeqeshi wonozinti kwiChiefs.
“Ngikhululekile ngokubuya kwami. Sengike ngahambela amazwe ehlukene kusukela ngashiya lapha (eNaturena). Ngibe wumqeqeshi weBafana Bafana, ngaba nakwiSuperSport (United)… kodwa cishe bonke abantu bayakwazi lokho.
“Ngaphambi kokubuya lapha bengiseSweden, kanti ngaphambi kwalokho bengise-India. Nokho benginokuza lapha ngizovakashela izingane zami. ULee usebenza khona la kwiChiefs, indodakazi yami imaphakathi nezwe (eKZN).
“Umndeni wami uyeza kuleli uzovakasha njalo uma kuvela ithuba,” kuchaza yena. UBaxter uxolisile nangamazwi akhe alumelayo ngokudlwengula awasho ngesikhathi ekwi-Odisha e-India.
Previous Previous post: UBenni uvuse Usuthu ebuthongweni beminyaka
Next Next post: Akanandaba nabambiza ngesehluleki u-Erasmus